Iza no nilaza fa mihemotra ny satroboninahitra nomerika Apple Watch? | Avy amin'ny mac aho
Iza no nilaza fa mihemotra ny satroboninahitra nomerika Apple Watch?
Izay nolazaiko hoe lazaiko izao hoy aho Diego ... Atomboko amin'ity andianteny ity ity lahatsoratra ity satria eo amin'ny tontolon'ny famantaranandro nomerika, tamin'ny fotoana nanoloran'i Apple ny Apple Watch teo amin'ny fiarahamonina, nahita fa nisy karazana satroboninahitra mihodina nanandratra ny tànany ho eo an-dohany ny tsirairay nilaza hoe ahoana no nahasahian'ilay orinasa paoma nametraka zavatra toy izany teo amin'ny famantaranandro.
Nandritra ny volana maro dia hita fa na dia singa efa nisy aza tamin'ny famantaranandro hatramin'ny nanombohany, dia mbola singa iray nanamora ny fitetezana ny fampiasa iray amin'ny famantaranandro marani-tsaina.
Samsung dia mpifaninana lehibe indrindra hatrizay ary niaraka tamin'ny Samsung Gear dia te hitarika ny tsenan'ny smartwatch ihany koa izy. Na izany aza, nisy zavatra tsy nety ary ny rafitra fiasa, izay tamin'ny voalohany dia ny Android Wear ary avy eo ny Tizen, izay tsy dia be loatra sy tsotra araka ny nampoizina. Izany no antony nanapahan-kevitra Samsung handao ny Android Wear sy Raiso ny rafitra Tizen anao amin'ireto rindrambaiko manaraka ireto.
Rehefa nametraka ny Apple Watch teny an-tsena i Apple, Samsung dia afaka nametraka hevitra tsotra toy ny kodiarana amin'ny famantaranandro, fa mba tsy hifandraisany mivantana amin'ny hevitr'i Apple miaraka amin'ny satroboninahitra nomerika, inona ny nampihatra izy ireo dia bezel mihodina amin'ny Gear s2 sy Gear s3.
Na izany aza, androany dia mamerina izahay fa ilay Google goavambe, miaraka amin'ny LG fanta-daza, dia hametraka eo an-tsena famantaranandro heverina ho voalohany, nefa tsy Apple, dia hanana satroboninahitra nomerika mitovy amin'ny an'ny Apple Watch. Ity famantaranandro vaovao hitanao ity amin'ny sary miaraka amin'ity lahatsoratra ity dia avy amin'ny tanan'ny kinova manaraka amin'ny rafitry ny Google ho an'ny fiambenana nomerika, ny Android Wear 2.0. Ho fanampin'izany, hanana efijery mikasika izy izay miaraka amin'ny rafitra fanekena sora-tanana mitovy amin'ny an'ny Scribble an'ny Apple Watch. Ho hitantsika eo raha ny 9 febroary, izay no tokony hanaovana izany haseho ity famantaranandro Google sy LG vaovao ity, manaloka ny foto-kevitry ny Apple Watch.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Iza no nilaza fa mihemotra ny satroboninahitra nomerika Apple Watch?
ny editor dia manana hevitra bebe kokoa noho ianao ... Manoro hevitra anao aho hamaky ity pejy ity ... angamba tsy maintsy adikao ho anao sy ny zava-drehetra izany haha ​​salu2: http://www.samsung.com/es/consumer/mobile-devices/wearables/gear/SM-R760NDAAPHE
Benito am-panajana rehetra Heveriko fa diso ianao, tsy mitovy amin'ny melchor izay nifono na ninono namono
Mahita malware hafa i macarwarebytes amin'ny macOS, amin'ity indray mitoraka ity dia tsy dia ratsy loatra